Seychelles jikọtara ugbu a na Bucharest
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Seychelles njem njem » Seychelles jikọtara ugbu a na Bucharest
Ndị njem otu narị na iri isii na abụọ, ndị ka n'ọnụ ọgụgụ si Bucharest, Romania, rutere na Seychelles n'ụkpụrụ iwu Air Seychelles pụrụ iche na Fraịde a, Eprel 30, 2021, na Seychelles International Airport nke Pointe Larue.
Seychelles CEO na-anabata ọkwa mbụ na usoro jikọtara ndị njem na mba agwaetiti ahụ.
Ihe dị ka ndị njem 500 ga-abata n'ime izu 4 na-esote ka agwaetiti ndị ahụ maliteghachiri njem nlegharị anya.
N’agbata Machị 15 na Eprel 15, 2021, Seychelles dekọtara ndị ọbịa 15,465 na-agbadata n’ụsọ ya.
A na-atụ anya akwụkwọ iwu ahụ, nke mbụ, a ga-atụ anya maka izu 4 na-esote ma ga-ejikọ ụfọdụ ndị njem 500 na obere agwaetiti ahụ, bụ nke mepere ụzọ ya maka njem nlegharị anya kemgbe Machị 2021.
Ndị njem ahụ siri n'ụgbọ elu A320Neo pụta, Pti Merl Dezil banye anwụ na-acha Seychelles ma bụrụ ndị otu ndị na-agba egwu n’obodo ndị yi uwe ọdịnala na-eme egwuregwu na-agba egwu na egwu dị iche iche nabatara ha.
Na-eme ka ọbịbịa ha na paradaịs bụrụ ihe echefu echefu, ndị ọbịa natara obere akara si n'aka ndị njem njem njem nke Seychelles (STB) ka ha na-eche ka ndị ọrụ ahụike na ndị mbata na hazie akwụkwọ ha.